​န​န္ဒ​မျိုး​ဆောင်(30 April 16) ﻿
​နိုင်​ငံ​တော်​ငြိမ်​ဝပ်​ပိ​ပြား​မှု ​တည်​ဆောက်​ရေး​အ​ဖဲွ့​လက်​ထက်​တွင် ​မိုး​ကုတ်​မြို့​နယ် ​ဓာတ်​တော်​တောင်​
ဒေ​သ ​တွင်း​အ​မှတ်(၁)​၌ ​တူး​ဖော်​တွေ့​ရိှ​ခဲ့​သည့် ​န၀​တ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး ​ယ​ခု​အ​ခိျန်​မည်​သည့်​နေ​ရာ​၌ ရောက်​ရိှ​နေ​သည်​ကို ​ပြည်​သူ​များ ​စိတ်​ဝင်​စား​လျက်​ရိှ​နေ​သည်။ ​
က​မ္ဘာ့​အ​ကြီး​ဆုံး ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​ဟု ​ပြော​ဆို​ခဲ့​ကြ​သည့် ​အ​လေး​ခိျန် ၅၀၄ ​ဒ​သ​မ ၅၀ ​ကာ​ရက်​ရိှ ​န၀​တ​
ပ​တ္တ​မြား​ကြီး ​သည် ​နေ​ပြည်​တော်​ရိှ ​ကျောက်​မျက်​ရ​တ​နာ​ပြ​တိုက်​၌ ​မ​ရိှ​ကြောင်း ​ပြ​တိုက်​တာ​ဝန်​ရိှ​သူ​
တ​ဦး​က News Watch ​သို့ ​ပြော​ကြား​သည်။
''​န . ၀ . ​တ ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​က ​နိုင်​ငံ​တော်​အ​ဆင့်​တန်း​ဝင် ​ရ​တ​နာ​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက် ​လုံ​ခြုံ​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ထိန်း​သိမ်း​
ထား​တယ်​လို့ ​သိ​ရ​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​တို့​ဆီ​မှာ​တော့ ​အဲ​ဒီ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး ​မ​ရိှ​ပါ​ဘူး။ ​က​မ္ဘာ့​အ​ကြီး​ဆုံး ​ပု​လဲ​ကြီး​တော့ ​ရိှ​ပါ​တယ်''​ဟု ​၎င်း​က ​ပြော​သည်။
​န၀​တ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​ကို ​ပြည်​ပ​သို့ ​ခိုး​ထုတ်​ရန် ​ကြံ​စည်​သူ​များ​ထံ​မှ ​ထောက်​လှမ်း​ရေး​တပ်​ဖဲွ့​က ​ပြန်​လည်​ရ​ယူ​နိုင်​ခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ ​ဖြစ်​စဉ်​မှာ ၁၉၉၀ ​ပြည့်​နှစ်​တွင် ​မ​န္တ​လေး​မြို့​နေ ​ဦး​သန်း​ထွန်း (​ခ) ​နေ​ပြည်​တော်​သန်း ​ထွန်း​နှင့်​ဇ​နီး ​ဒေါ်​စိုး​စိုး​ထွန်း၊ ​မိုး​ကုတ်​မြို့​နေ ​ဦး​လှ​မြင့်၊ ​ဦး​ဇော်​ဝင်း​တို့​သည် ​မိုး​ကုတ်​မြို့​နယ်၊ ​ဓာတ်​တော်​တောင်​ဒေ​သ​နှင့် ​အုန်း​ပင်​ရေ​ထွက်​ဒေ​သ၊ ​လယ်​ဦး​ရပ်​တို့​တွင် ​တူး​ဖော်​ရ​ရိှ​သည့် ​ကျောက်​မျက်​ရ​တ​နာ​များ​နှင့် ​ပ​တ္တ​မြား ​များ​အား ​တ​ရား​မ​ဝင် ​ပြည်​ပ​သို့ ​ခိုး​ထုတ်​ရောင်း​ချ​ခြင်း​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ​ထောက်​လှမ်း​ရေး​အ​ကူ​တပ်​နှင့် ​ပူး​ပေါင်း​စုံ​စမ်း​ဖော်​ထုတ်​ခဲ့​သည်။
​ပြည်​တွင်း​ရိှ ​ကျောက်​ပဲွ​စား​အ​ချို့​ထံ​မှ ​န၀​တ ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​အ​ပါ​အ​ဝင် ၆၃၃၀ ​ကာ​ရက်​ရိှ ​ပ​တ္တ​မြား​ရိုင်း​များ၊ ​နိုင်​ငံ​ခြား​ဈေး​ကွက်​သို ​ပို့​ထား​သည့် ​အ​နက်​မှ ၁၈၇၀ ​ဒ​သ​မ ၁၀ ​ကာ​ရက်​ရိှ ​ပ​တ္တ​မြား​ရိုင်း​များ ​ရောင်း​ချ​ခြင်း ​မ​ပြု​ရ​သေး​သည့် ၂၂၅၂၈ ​ဒ​သ​မ ၅၀ ​ကာ​ရက်​ရိှ ​ပ​တ္တ​မြား​ရိုင်း​များ ​စု​စု​ပေါင်း ၃၀၇၂၈ ​ဒ​သ​မ ၆၀ ​ကာ​ရက်​ရိှ ​ပ​တ္တ​မြား​ရိုင်း​များ​နှင့် ​ကျောက်​မျက်​ရ​တ​နာ ​ရောင်း​ရ​ငွေ ​ကျပ်​သိန်း ၁၀၀ ​ကို ​သိမ်း​ဆည်း​ရ​မိ​သ​ဖြင့် ​ဦး​သန်း​ထွန်း​ပါ ​လေး​ဦး​အ​ပေါ် ၁၉၈၉ ​ခု​နှစ် ​နိုင်​ငံ​တော် ​စီး​ပွား​ရေး​လုပ်​ငန်း​ဥ​ပ​ဒေ၊ ၁၉၆၃ ​ခု​နှစ် ​အ​များ​နှင့်​သက်​ဆိုင်​သော​ပ​စ္စည်း ​ကာ​ကွယ်​စောင့်​ရှောက်​ရေး ​ဥ​ပ​ဒေ ​ဖြင့် ​မာ​ရှယ်​လော​ဥ​ပ​ဒေ​အ​ရ ​ဖဲွ့​စည်း​ထား​သော ​စစ်​ခုံ​ရုံး​သို့ ​တ​ရား​စဲွ​တင်​ပို့ ​ခဲ့​ကြောင်း ​န၀​တ​အ​စိုး​ရ​လက်​ထက်​မှတ်​တမ်း​များ​အ​ရ ​သိ​ရိှ​ရ​သည်။
''​နေ​ပြည်​တော် ​ဦး​သန်း​ထွန်း​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ကျောက်​မျက် ​လော​က​မှာ ​နာ​မည်​ကြီး​ပါ​တယ်။ ​အ​ခု​တော့ ​အ​သက် (၈၀)​လောက်​ရိှ​ပြီး ​မ​န္တ​လေး​မှာ​နေ​တယ်​လို့ ​ကြား​ပါ​တယ်။ ​န၀​တ ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး ​ဘယ်​ရောက်​နေ ​လဲ​ဆို​တာ​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ကျောက်​မျက်​လော​က​သား​တွေ​လည်း ​မ​သိ​ကြ​ပါ​ဘူး''​ဟု ​ကျောက်​မျက်​ရ​တ​နာ​ကုန်​သည်​တ​ဦး​ဖြစ်​သူ ​ဦး​လှ​ဝင်း​က ​ပြော​သည်။
​ပ​တ္တ​မြား​များ​ကို ​အ​ရည်​အ​သွေး​အ​ပေါ်​လိုက်​၍ ​ပ​ထ​မ​တန်း​စား ​ခို​သွေး (Pigeon Blood)၊ ​ဒု​တိ​ယ​တန်း​စား ​ယုန်​သွေး (Rabbit Blood)၊ ​တ​တိ​ယ​တန်း ​ဘို​ကြိုက် (British Blood)၊ ​စ​တု​တ္ထ​တန်း ​လက်​ကောက်​စိ (Bracelet) ​နှင့် ​ပ​ဉ္စ​မ​တန်း​စား ​ကု​လား​ငို (Indian Cry) ​ဟူ​၍ ​ခဲွ​ခြား​ထား​လေ့​ရိှ​ပြီး ​န၀​တ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​မှာ ​ဒု​တိ​ယ​တန်း​နှင့် ​တ​တိ​ယ​တန်း​ကြား​ရိှ ​အ​မျိုး​အ​စား​မျိုး​ဖြစ်​ကြောင်း ​ကျောက်​မျက်​ရ​တ​နာ​ကုန်​သည်​များ​ထံ​မှ ​သိ​ရိှ​ရ​သည်။
​န၀​တ ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ​နေ​ပြည်​တော်​ရိှ ​မြန်​မာ့​ကျောက်​မျက်​ရ​တ​နာ​ရောင်း​ဝယ်​ရေး​လုပ်​ငန်း​ထံ News Watch ​က ​မေး​မြန်း​ရာ ​စီ​မံ​ရေး​ရာ​ဦး​စီး​မှူး​က ​မ​သိ​ရိှ​ကြောင်း ​ပြော​ကြား​ခဲ့​သည်။
''​ခင်​ဗျား​ပြော​တာ​တွေ ​ကျွန်​တော်​မ​သိ​ဘူး။ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​ငယ်​ငယ်​တုန်း​က​တော့ ​လုံ​ခင်း​ဖား​ကန့်​မှာ ​တန်​ခိျန် ၃၃၀၀ ​ရိှ​တဲ့ ​ကျောက်​စိမ်း​တုံး​ကြီး​တွေ့​တယ်​လို့​တော့ ​ကြား​ဖူး​တယ်''​ဟု ​ပြော​သည်။
​မြန်​မာ့​နန်း​စဉ်​ရ​တ​နာ ​ပ​တ္တ​မြား​င​မောက်​သည် ​အ​လေး​ခိျန် ၁၇၂ ​ကာ​ရက်​ရိှ​ပြီး ​ပ​ထ​မ​တန်း​စား ​ခို​သွေး​ရောင် ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​ဖြစ်​သော်​လည်း ​ယ​နေ့​တိုင် ​အ​စ​ရှာ​မ​ရ​ဘဲ ​ပျောက်​ဆုံး​လျက်​ရိှ​နေ​သည်။ ​အ​ရည်​အ​သွေး​အား​ဖြင့် ​ပ​တ္တ​မြား​င​မောက်​ကို ​မ​မီ​သော်​လည်း ​အ​လေး​ချိန်​အား​ဖြင့် ​သုံး​ဆ​ခဲွ​ခန့် ​ကြီး​မား​သည့် ​န၀​တ​ပ​တ္တ​မြား​ကြီး​မှာ ​ယ​ခု​အ​ခါ ​ဘယ်​ဌာ​နေ​ဘယ်​စ​ခန်း​၌ ​စံ​မြန်း​နေ​သည်​ကို​တော့ ​န၀​တ​လက်​ထက် ​ဗိုလ်​ချုပ်​ကြီး​များ​သာ ​အ​သိ​ဆုံး ​ဖြစ်​မည် ​ထင်​ပါ​သည်။